मासु भन्दा महँगो हुन थाल्यो टमाटर,कति पुग्यो प्रति केजी ? – Dainik Sangalo
September 23, 2020 439
काठमाडौँ, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा प्याज, आलुसहित हरियो तरकारीको पनि भाउ आकाशिएको छ । थोकको तुलनामा खुद्रा बजारमा भाउ तेब्बरसम्म बढेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
Prevदुखद खबर, गुल्मीमा सडकमा हिँडदा हिँड्दै पहिरोमा पुरिएर पाँच वर्षीय बालकसहित दुई जनाको मृत्यु
Nextपूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको जन्म दिन कति बर्षामा लागिन ?
सिन्धुपाल्चोकमा पतिले राखे यस्तो प्रस्ताव, पत्निले नमान्दा ज्या नै लि ए
३ करोड लगानीमा निर्माण हुँदै ‘छक्का पञ्जा ४’